မေးလ် MAIL.RU အားဖြင့်သင့်စကားဝှက်ကိုပြန်ဆယ်နည်း - မေးလ် MAIL.RU - 2019
အဓိက မေးလ် Mail.ru
တချို့ကမေးခွန်းများကိုသို့သော်ငါတို့သည်အစဉ်အမြဲအပိုဆောင်းအကူအညီမပါဘဲဖြေရှင်းရမလိုခငျြဘူး။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို Instagram ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါသင်ဒီအခြေအနေကို၌ရှိကြ၏လျှင်, ထောက်ခံကြောင်းရေးသားဖို့အချိန်ပါပဲ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, Instagram ကိုက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိလက်ရှိတစ်နေ့လျှင်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်, ကျွမ်းကျင်သူများရန်သင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးရန်တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အလမ်း - မိုဘိုင်း application များအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Instagram ကိုစတင်ရန်။ ပြတင်းပေါက်၏အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲတွင်ပရိုဖိုင်းကိုစာမကျြနှာရရန် tab ကို၏အစွန်းရောက်လက်ျာဘက်၌ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ (သုံးစက်နှင့်အတူ Android ကို OS က icon ကိုများအတွက်) ဂီယာနှင့်အတူအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "ပံ့ပိုးမှု" button ကို select လုပ်ပါ "ပြဿနာတစ်ခုတိုင်ကြားရန်"။ စာစောင်ကိုမှအောက်ပါ"တစ်ခုခုအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိ".
မျက်နှာပြင်, သင်ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်အဘယ်အရပ်မှထွက်ဖြည့်မယ့်ပုံစံ, ဖော်ပြရန်ခေတ္တမျှပေမယ့် succinctly ပြဿနာရဲ့အနှစ်သာရကိုထုတ်ဖော်ပြသပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာရဲ့ဖော်ပြချက်နှင့်အတူပြီးစီးခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Send".
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Instagram ကို၏လုပျငနျးနှင့်ဆက်စပ်သောမေးခွန်းများကိုအများစု, သင်အထူးကုဝန်ဆောင်မှုမပါဘဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုလိုချင်သောရလဒ်မဆောင်ခဲ့ပါဘူးဘယ်မှာကိစ္စများတွင်, နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အတူတင်းကျပ်ပါဘူး။
ဗီဒီယို Watch: The agony of trying to unsubscribe. James Veitch (စက်တင်ဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © မေးလ် Mail.ru 2019